Yakakwira Mhando Yakadzika mutengo wakashambadzira SODIUM ETHYL 2-SULFOLAURATE / Sodium Lauroyl isethionate (SLI) cas 7381-01-3 Mugadziri uye Mutengesi | Zhuoer
Mutengo wakaderera surfactant SODIUM ETHYL 2-SULFOLAURATE / Sodium Lauroyl isethionate (SLI) cas 7381-01-3
Kuchena: 78% ~ 83%
Sodium Lauroyl Isethionate SLI inogadzikana ine hunyanzvi yakanyatsogadzirirwa kushandiswa muzvigadzirwa zvekuchenesa pachako.
Icho chigadzirwa chakakwirira chinopupa furo chinopa dense, yakasviba lather kana mafomati.
SLI inenge isina munyu uye isina mvura yakaoma uye ine munyu ine yakanyanya kupupuma furo. Inoenderana nesipo uye inopa yakanakisa lime-sipo kupararira kuitira kudzora kuumbwa kwechikwambo mumabhawa sipo
Iyo ine mashoma solubility mune yakapfava uye yakaoma mvura. Iyo yakagadzikana mune mafomati ari padyo-asina kwazvakarerekera PH uye tembiricha yemukamuri kwenguva yakareba asi zvishoma nezvishoma hydrolyse pakakwirira tembiricha.
Inogona kushandiswa mu syndet mabara uye emvura masystem senge ma shampoo, inoshambidza muviri mabhati ekugeza.
Chitarisiko Machena machena
Chiitiko 78% kusvika 83%
Mahara Mafuta Acid 14% max
PH (10% mu demin. Mvura) 4.7 kusvika 6.0
Ruvara (5% mupropanol / mvura) 20 max
Mvura 1.5% max
SODIUM COCOYL ISETHIONATE KUSVIRA
1 Inoshandiswa musipo:
Zvakanakira kushandisa musipo: Imwe ndeye ine nani kugona kurwisa kupfavisa. Imwe yacho ndeyekuti, inogona kudzikisa kukosha kwePH yesipo, hunyoro uye husina kutsamwa, ndicho chinhu chakanakisa mbishi chekugadzira sipo isina kwayakarerekera.
2 Inoshandiswa mukuchenesa:
Unyoro uye hunogona kuburitsa fuma uye yakapfava furo, bvisa tsvina zvakanaka.
3.Kushandiswa mushawa yekugezera:
Kunze kwekugadzira fuma yakapfava uye isina kusimba, ine basa rakakosha rekudzikira kutsvedza, izere nekubvisa kunhuwa kwemafuta kunoonekwa mushure mekushandisa chinyakare shawa gel Uye inogona kuchengetedza ganda rako kupfava uye kupenya.
4.Used mune sipo:
Hunyoro uye hwakaderera husina kutsamwa SCI inotsiva vafambi vanoshanda vane chepfu chinhu.Inogona kuchengetedza nekubata bvudzi zvakanyanya kuchengetedzeka.
Ndingaite sei kutora SODIUM ETHYL 2-SULFOLAURATE / Sodium Lauroyl isethionate (SLI) cas 7381-01-3?
Pashure: Biological buffer N-Tris (hydroxymethyl) methyl-3-aminopropanesulfonicacid / TAPS CAS 29915-38-6
Zvadaro: Fekitori inopa 2-Nitrobenzaldehyde / O-Nitrobenzaldehyde CAS 552-89-6 nemutengo wakanakisa
Yakachena kuchena BIS-TRIS Buffer CAS 6976-37-0 ine ...
Yakachena kuchena Tris Hydrochloride / TRIS-HCL CAS 118 ...
Factory mutengo 99% Cytidine 5'-triphosphat ...
Factory mutengo 99% Guanosine-5 -triphosphoric ai ...
Factory zvitengeswa pachedu hanya amino asidhi surfact ...